Mespilus Germanica: युरोपेली loquat बारे सबै | सबै रूखहरू
मोनिका सान्चेज | 16/05/2022 13:35 | फल रूखहरू, पातलो फल रूखहरू
छवि - विकिमीडिया/रविमर
El मेस्पिलस जर्मनिका वा युरोपेली मेडलर पातलो फलफूलको रूख हो जुन सामान्यतया जति खेती गरिन्छ एरियोबोट्रिया जापोनिका; यद्यपि, यो एउटा बिरुवा हो जुन हामीसँग युरोपमा रहेको मौसम र माटोको सामना गर्न पनि तयार छ, यसको फाइदाको साथ यो E. japonica भन्दा धेरै कम हुन्छ।
तर यो धेरै खेती नगरेकोले, यो लगभग अज्ञात फल रूख हो। यसको ख्याल कसरी गर्नुपर्छ ? कति पटक पानी हाल्नु पर्छ? खैर, यी शंकाहरू र अन्य हामी अब समाधान गर्नेछौं।
1 यूरोपीय loquat को विशेषताहरु के हो?
2 यो के हो?
3 Mespilus Germanica को हेरचाह के हो?
3.1 कहाँ राख्ने ?
3.2 युरोपेली मेडलरलाई कसरी पानी दिने?
3.3 कहिले तिर्ने?
3.4 Mespilus Germanica कहिले र कसरी छाँट्ने?
4 युरोपेली मेडलर कीटहरू
यूरोपीय loquat को विशेषताहरु के हो?
छवि - विकिमीडिया/ एच. Zell
हामीले स्पष्ट पार्नु पर्ने पहिलो कुरा यो हो कि, उनको थरको बावजुद, जर्मनिक, मूल रूपमा जर्मनी (वर्तमान जर्मनी) बाट होइन, तर पश्चिमी एशियाबाट। यो मानिन्छ कि यो 700 ईसा पूर्व वरिपरि रोमीहरूबाट युरोपमा आएको हो। ग यो ठूलो रूख वा झाडी हो, 5-6 मिटरको उचाइमा पुग्छ। यसले एउटा अनियमित मुकुट विकास गर्छ, फराकिलो आधारको साथ, र हाँगाहरू जुन घुमाउरो हुन्छ, यसले विद्रोही तर सुन्दर उपस्थिति दिन्छ।
यसका पातहरू हरियो र लामो हुन्छन्, 12-14 सेन्टिमिटर लामो र5सेन्टिमिटर चौडाइमा पुग्छन्, र चिल्लो वा केही हदसम्म दाँतेदार मार्जिनहरू हुन सक्छन्। फूलहरू सेतो, लगभग5सेन्टिमिटर व्यासमा, र फल एक गोलाकार घुँडा हो जुन लगभग 2,5 सेन्टिमिटरको हुन्छ र सुनौलो पहेंलो हुन्छ जब यो परिपक्व हुन्छ।
युरोपेली मेडलर को रूपमा प्रयोग गरिन्छ जापानी मेडलर; अर्थात्: यो एक राम्रो बगैचा वा बगैचा रूख हुन सक्छ, यसलाई भाँडोमा पनि राख्न सक्षम हुनु; तर यसको फल पनि खान योग्य छ, यद्यपि तिनीहरूले नरम प्रक्रियाबाट गुज्रनुपर्छ ताकि तिनीहरू समस्या बिना खान सकिन्छ, उदाहरणका लागि, तिनीहरूलाई रूखमा छोडेर प्राकृतिक रूपमा नरम गर्न।
जब यो तयार हुन्छ, छाला खैरो र चाउरी पर्न जान्छ र मासु बिग्रिएको देखिन सक्छ, तर वास्तविकताबाट केहि पनि छैन: जब यो हुन्छ, यो पहिले नै सेवा गर्न सकिन्छ।
यद्यपि, यदि तपाईंलाई यो मनपर्दैन भने, तपाईं जाम तयार गर्न प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ वा यसलाई मिठाई नुस्खामा समावेश गर्नुहोस्।
के हेरविचार छन् मेस्पिलस जर्मनिका?
हाम्रो नायक फलफूलको रूख हो जसलाई धेरै सरल हेरचाह चाहिन्छ। यसले घाम, चिसोलाई प्रतिरोध गर्छ र लगभग कुनै पनि प्रकारको माटोमा बढ्छ। ध्यानमा राख्नुको लागि मात्र कुरा यो हो कि यो धेरै क्षारीय माटोमा बढ्न सक्दैन, किनकि फलामको कमीले यसको पातहरू पहेंलो हुन सक्छ।
कहाँ राख्ने ?
El मेस्पिलस जर्मनिका यसलाई बढ्नको लागि धेरै प्रकाश चाहिन्छ, त्यसैले हामी यसलाई बाहिर राख्नेछौं। चाहे हामी यसलाई बगैंचामा रोप्न चाहन्छौं वा यदि हामी यसलाई भाँडोमा बढाउन जाँदैछौं भने, यो धेरै अनुकूलनीय भएकोले हामीलाई त्यसो गर्न सम्भव हुनेछ। थप रूपमा, यसले -18ºC सम्मको मध्यम फ्रस्टलाई सजिलैसँग प्रतिरोध गर्दछ।
हामीले केवल दिमागमा राख्नु पर्छ पृथ्वी अम्लीय वा तटस्थ हुनुपर्छ। यसको मतलब यो हो कि यदि यो कन्टेनरमा हुन गइरहेको छ भने, हामी एक सब्सट्रेट राख्नेछौं जसको pH7वा कम छ, जस्तै यो BioBizz बाट, र यदि यो बगैंचा वा बगैंचामा हुन गइरहेको छ भने, हामीले पहिले माटोको pH के हो भनेर पत्ता लगाउनेछौं, किनकि यो त्यहाँ कम वा तटस्थ भएमा मात्र यो सम्भव हुनेछ।
युरोपेली मेडलरलाई कसरी पानी दिने?
यो सम्भव भएमा वर्षाको पानी वा उपभोगको लागि उपयुक्त भएको पानीले सिँचाइ गर्नुपर्छ। यो महत्त्वपूर्ण छ कि यसमा धेरै चूना छैन, किनकि यसले छिद्रहरू बन्द गर्ने परिणामको रूपमा क्षति पुर्‍याउँछ। थप रूपमा, तपाईंले गर्मीमा हप्तामा दुई देखि चार पटक पानी दिनु पर्छ, र बाँकी कम गर्नुहोस् ताकि माटो सुक्न सक्छ।
र यदि यो भाँडोमा हुन गइरहेको छ भने, जल निकासी प्वाल भएको एउटा छान्नुहोस्। प्वाल नभएको एउटा ठाउँमा रोपियो भने रूख लामो समयसम्म बाँच्दैन।
El मेस्पिलस जर्मनिका यो बढ्दै गर्दा, प्रारम्भिक वसन्त देखि प्रारम्भिक शरद ऋतु सम्म उर्वर हुनुपर्छ। यसलाई जैविक उत्पादनहरू जस्तै मल्च, परिपक्व र सुख्खा कुखुराको मल, वा ग्वानो, प्रयोगको लागि निर्देशनहरू पालना गरी उर्वर गरिनेछ। यस तरिकाले, तपाईंले यसलाई सही पाउनुहुनेछ।
त्यसैगरी, समय समयमा एसिड बिरुवाहरूका लागि विशेष मलको साथ भुक्तान गर्न दुख्दैन। तपाइँ यहाँ किन्न सक्नुहुन्छउदाहरणको लागि, प्रत्येक दुई वा तीन महिनामा एक पटक यो सुनिश्चित गर्न कि यसमा आवश्यक सबै पोषक तत्वहरू छन्। तर हो, यसलाई कुनै अन्य मल वा मलमा मिसाउनु हुँदैन, किनकि यसले ओभरडोज निम्त्याउँछ र यसले धेरै पीडा दिन्छ।
कहिले र कसरी छाँट्ने मेस्पिलस जर्मनिका?
यदि तपाइँ यसलाई भाँडोमा राख्न चाहनुहुन्छ भने, र/वा यदि तपाइँ यसलाई सफा कप राख्न चाहनुहुन्छ भने, तपाईं जाडोको अन्तमा यसलाई छाँट्न सक्नुहुन्छ। मरेका हाँगाहरू हटाउनुहोस्, जुन सुक्खा र भंगुर छन्, र तिनीहरूको लम्बाइ घटाउने मौका लिनुहोस् जुन यति बढ्दै छ कि तिनीहरूले बिरुवालाई विद्रोही उपस्थिति दिन्छ।
संक्रमणहरू रोक्नको लागि तपाईंले पहिले सफा गर्नुभएको छाँट्ने उपकरणहरू प्रयोग गर्नुहोस्।
युरोपेली मेडलर कीटहरू
यद्यपि यो एक प्रतिरोधी बिरुवा हो, यो निम्न कीटहरु द्वारा प्रभावित हुन सक्छ:
Mealybugs: तिनीहरू स-साना कीराहरू हुन् जुन कपासको बलहरू जस्तो देखिन सक्छ जुन सजिलै भाँचिन्छ, वा लिम्पेटहरू (जस्तै औंलाको नङले हटाउन सकिन्छ)। तिनीहरू पातको मुनि, स्नायुको छेउमा, र कहिलेकाहीँ कोमल डाँठहरूमा लुक्छन्। यो एक जैविक विरोधी कोचिनल कीटनाशक संग लड्न र हटाउन सम्भव छ, जस्तै यो.
एफिड्स: यी कीराहरू हुन्, धेरै साना, लगभग ०.५ सेन्टिमिटर, जसले पात र फूलहरूको रसमा खुवाउँछन्। तिनीहरूलाई हटाउने सबैभन्दा प्रभावकारी तरिका एक जैविक एन्टी-एफिड कीटनाशक (तपाईं यसलाई किन्न सक्नुहुन्छ यहाँ), तर हाँगाबाट झुण्डिएको पहेंलो टाँसिने पासोले नियन्त्रण गर्न सकिन्छ। तिनीहरूलाई किन्नुहोस् यहाँ.
फल उडान: यो फलफूललाई ​​टोक्ने कीरा हो र त्यसो गर्दा पोथीले अण्डा छोड्छ । त्यसकारण, यी अब मानव उपभोगको लागि उपयुक्त छैनन्। तिनीहरूलाई नियन्त्रण गर्न तपाईंले पहेंलो टाँसिने पासोहरू प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ, वा म्यालाथियन युक्त कीटनाशकहरूसँग लड्न सक्नुहुन्छ।
तपाईले के सोच्नु भयो मेस्पिलस जर्मनिका?
लेखको पूर्ण मार्ग: सबै रूखहरू » फिचस » फल रूखहरू » यूरोपीयन मेडलर (मेस्पिलस जर्मनिका)